के साच्चै सांसद राजेन्द्र लिङ्देनलाई मार्न ५० लाखको ‘सुपारी’आएकै हो त ? – Khabar Art Nepal
के साच्चै सांसद राजेन्द्र लिङ्देनलाई मार्न ५० लाखको ‘सुपारी’आएकै हो त ?
By Manish khatri	 On २६ चैत्र २०७५, मंगलवार १६:२४
चैत २६ काठमाडौं। झापा क्षेत्र नम्बर–३ का सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ज्यान लिने धम्की आएको छ ।
‘कसैले ५० लाखको लोभमा ममाथि गोली चलाउन सक्ला रु’ भन्दै सांसद लिङदेनले ट्वीट गरेपछि उनीमाथि ज्यान लिने हमलासहित फोन धम्की आएको रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।
ट्वीटमा फोन धम्कीको थोरै संकेत दिए पनि सांसद लिङदेनले घटनाबारे कतै उजुरबाजुर गरेका थिएनन् ।लामौ मौनतापछि आफूलाई ज्यान लिने धम्कीसहित दुई सातादेखि फोन आइरहेको उनले बताए ।
‘तँलाई मार्न ५० लाख रकम दिइसकेको छु । अब बाँच्दैनस्’ भन्दै कहिले ह्वाट्स एप त कहिले मोबाइलमा फोन गरेर आउने गरेको छ । ‘एउटा आवाजबाट मलाई धम्की दिइन्थ्यो भने अर्को आवाजबाट मलाई मार्न पैसा दिएकाले सचेत हुन भनिन्थ्यो’, लिङ्देनले भने ।
उनका अनुसार काठमाडौंमै भएका वेला त्यो फोन आएपछि उच्च प्रहरी अधिकारीसँग छलफल पनि गरेका रहेछन् । यद्यपि, लिखित उजुरी भने दिएनन् ।प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान थालिसकेको छ । त्यसक्रममा झापाबाट एक जना व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् । तर, उनले किन लिङ्देनलाई त्यसरी फोन गरे भन्ने खुलेको छैन ।
दुई जनाको स्वरमा फोन गरिए पनि दुवै व्यक्ति एकै भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । घटनामा अन्यको पनि संलग्नता हुने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ । अन्य व्यक्ति पक्राउ परेपछि मात्रै लिङ्देनलाई दिइएको धम्कीबारे थप खुल्ने प्रहरीले बताएको छ ।
सिरहामा ट्रक र मोटरसाइकल बीच ठक्कर हुँदा तीनजनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्री लाइ निशाना बनाउदै विप्लव, जहाँ गयो त्यहिं कार्यक्रम ‘विथोल्ने’